ရောင်းသူမဲ့ စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ Amazon | MyTech Myanmar
ရောင်းသူမဲ့ စတိုးဆိုင်ကြီးဖွင့်လိုက်တဲ့ Amazon
ရောင်းသူမဲ့ဆိုလို့ ခေါင်းနည်းနည်းခြောက်သွားမယ်ထင်တယ်။ ငွေရှင်းကောင်တာမရှိတဲ့ စတိုးဆိုင်ပါ။ ဒါဆိုပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လိုရောင်းကြလဲ။ အကုန်အခိုးခံရမှာပေါ့? ခေါင်းမခြောက်ကြပါနဲ့။
ရောင်းသူမဲ့ အအေးရောင်းတဲ့စက်တွေမြင်ဖူးကြမှာပါ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ မတွေ့နိုင်ပဲ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ အသုံးပြုနေကြတာနှစ်နဲ့ချီနေပါပြီ။ အမေရိကားမှာဆိုရင် အအေးဗူးတွေအပြင် အာလူးကြော် နဲ့ တစ်ခြား Snack တွေဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ရောင်းသူမဲ့ စက်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။
အခုဆိုရင် အမေရိကားရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ အရောင်းအဝယ်သမားကြီးဖြစ်တဲ့ Amazon က စတိုးတစ်ခုလုံးကို အဆိုပါ ရောင်းသူမဲ့စက်တွေအများကြီးနဲ့ဖြည့်ထားပြီး အကြီးမားဆုံး ရောင်းသူမဲ့ စတိုးတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
Amazon ရဲ့ အဆိုပါ ရောင်းသူမဲ့ စတိုးဟာ ပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူး Amazon Go Convenient Store လို့ခေါ်တဲ့ စတိုးနှစ်ခုကို Amazon ရုံးချုပ်တည်ရှိတဲ့ Seattle (ဆီရာတယ် မြို့) မှာပဲ ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပြီး အခုနောက်ဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ Store ဟာ တတိယမြောက်ဖြစ်ပြီး စတိုး အကျယ်အဝန်းဟာ စတုရန်းပေ (၂,၁၀၀) ရှိပါတယ်။
Amazon Go မှာ ပစ္စည်းဝယ်ယူပြီးရင်ပိုက်ဆံရှင်းဖို့အတွက် Amazon Go App ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေကို မှန်တွေနဲ့ကာရံထားတဲ့ စင်တွေပေါ်မှာတင်ထားပြီး Camera Sensor တွေကိုအသုံးပြုကာ ဝယ်ယူမယ့်သူတွေလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းကို အတိအကျယူပေးနိုင်ပါတယ်။
Amazon Go Store တွေကို တစ်ခြားမြို့တွေမှာလည်းဖွင့်လှစ်လာနိုင်ပြီး အနာဂတ် Convenient Store တွေအတွက် ခြေလှမ်းအစပါပဲ။ ဝယ်သူတွေအတွက် ပစ္စည်းဝယ်ရတာပိုပြီး အဆင်ပြေသွားပေမယ့် အဲ့လို စတိုးတွေအများကြီးဖွင့်လာခဲ့ရင် အရောင်းဝန်ထမ်းတွေမလိုတော့တဲ့အတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးလာတော့မှာပါ။
ရောငျးသူမဲ့ဆိုလို့ ခေါငျးနညျးနညျးခွောကျသှားမယျထငျတယျ။ ငှရှေငျးကောငျတာမရှိတဲ့ စတိုးဆိုငျပါ။ ဒါဆိုပစ်စညျးတှကေို ဘယျလိုရောငျးကွလဲ။ အကုနျအခိုးခံရမှာပေါ့? ခေါငျးမခွောကျကွပါနဲ့။
ရောငျးသူမဲ့ အအေးရောငျးတဲ့စကျတှမွေငျဖူးကွမှာပါ။ ပွညျတှငျးမှာတော့ မတှနေို့ငျပဲ တဈခွားနိုငျငံတှမှောတော့ အသုံးပွုနကွေတာနှဈနဲ့ခြီနပေါပွီ။ အမရေိကားမှာဆိုရငျ အအေးဗူးတှအေပွငျ အာလူးကွျော နဲ့ တဈခွား Snack တှဝေယျယူနိုငျတဲ့ ရောငျးသူမဲ့ စကျတှအေမြားအပွားရှိပါတယျ။
အခုဆိုရငျ အမရေိကားရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲ အရောငျးအဝယျသမားကွီးဖွဈတဲ့ Amazon က စတိုးတဈခုလုံးကို အဆိုပါ ရောငျးသူမဲ့စကျတှအေမြားကွီးနဲ့ဖွညျ့ထားပွီး အကွီးမားဆုံး ရောငျးသူမဲ့ စတိုးတဈခုကိုဖှငျ့လှဈလိုကျပါတယျ။
Amazon ရဲ့ အဆိုပါ ရောငျးသူမဲ့ စတိုးဟာ ပထမဆုံးမဟုတျပါဘူး Amazon Go Convenient Store လို့ချေါတဲ့ စတိုးနှဈခုကို Amazon ရုံးခြုပျတညျရှိတဲ့ Seattle (ဆီရာတယျ မွို့) မှာပဲ ဖှငျ့လှဈထားပွီးဖွဈပွီး အခုနောကျဆုံးဖှငျ့လှဈလိုကျတဲ့ Store ဟာ တတိယမွောကျဖွဈပွီး စတိုး အကယျြအဝနျးဟာ စတုရနျးပေ (၂,၁၀၀) ရှိပါတယျ။
Amazon Go မှာ ပစ်စညျးဝယျယူပွီးရငျပိုကျဆံရှငျးဖို့အတှကျ Amazon Go App ကိုအသုံးပွုရမှာဖွဈပါတယျ။ ပစ်စညျးတှကေို မှနျတှနေဲ့ကာရံထားတဲ့ စငျတှပေျေါမှာတငျထားပွီး Camera Sensor တှကေိုအသုံးပွုကာ ဝယျယူမယျ့သူတှလေိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးကို အတိအကယြူပေးနိုငျပါတယျ။
Amazon Go Store တှကေို တဈခွားမွို့တှမှောလညျးဖှငျ့လှဈလာနိုငျပွီး အနာဂတျ Convenient Store တှအေတှကျ ခွလှေမျးအစပါပဲ။ ဝယျသူတှအေတှကျ ပစ်စညျးဝယျရတာပိုပွီး အဆငျပွသှေားပမေယျ့ အဲ့လို စတိုးတှအေမြားကွီးဖှငျ့လာခဲ့ရငျ အရောငျးဝနျထမျးတှမေလိုတော့တဲ့အတှကျ အလုပျအကိုငျရှားပါးလာတော့မှာပါ။
MyTech Myanmar2018-09-05T13:22:43+06:30September 5th, 2018|News, Tips & Stories|